शिक्षक बेपत्ता छानविन गर्न प्रशासनले बनायो बिद्यालय बन्द « Postpati – News For All
शिक्षक बेपत्ता छानविन गर्न प्रशासनले बनायो बिद्यालय बन्द
हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व पुथाउत्तरगंगा वडा न. २ पेल्माको श्री आधारभूत बिद्यालय दुई हप्तापछि बन्द रहेको छ । बिगत दुई दशक देखि उक्त बिद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षक मखन बहादुर केसीको बेपत्तापछी बयानको लागि सवै शिक्षकहरुलाई सदरमुकाम झिकाएका छन् । बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष जस बहादुर कामी, वडा प्रमुख सतसिङ बुढा, वडा सदस्य जन वहादुर कामी, मनराज झाँक्री, विधालयका हेडमास्टर बालाराम शर्मा, शिक्षिका कर्म जोक पुन, धनबह्दादुर बम्जन सबैलाई सदरमुकाम रुकुमकोट ल्याइएकोले बिद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो ।
साउन ३१ गते पुथाउत्तरगंगा गाउँपालीका तक घर भएका खिन्ते नामले चिनिने बिकास बुढाले कुटपिट गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । कुटपिट पछी उपचारको लागि शिक्षक केसी स्थानीय मेडिकल तातोपानी हेल्थ क्लिनिकका संचालक ज्ञान राज पुनसंग उपचार गर्न पुगेका थिए । भाद्र १४ गते साँझ बिधालयवाट फर्किएपछी बेपता भएका शिक्षक केसी अझै फेला परेका छैनन् । जिल्लावाट खटिएको प्रहरी टोलीले विधालयका शिक्षक, वडा प्रमुख सतसिङ बुढा, मेडिकल संचालक ज्ञान राज पुन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी गाउँलेहरुलाई बयानको लागि सदरमुकाम ल्याएको छ । केसीका परिवारले हिमको राम राज झाँक्री, पेल्माको बिनोद खत्री, तकको खिम्ते भनेर चिनिने बिकाश बुढाको नाममा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले तिनै जनालाई हिरासतमा राखिएको छ ।
शिक्षक मखन बहादुर अचाख्ली मदिरा सेवन गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । बेपत्ता हुनु भन्दा अगाडी उनले मदिरा पिउन छोडिसकेका थिए । मदिराको गहिरो लतमा फसिसकेका केसी मदिरा छोडिसकेपछी उनका हातहरु थरथर काँप्ने र मानसिक सन्तुलन केहि गडबडी भएको बिद्यालयका शिक्षक र केसीको घरबेटी ९० बर्षका रुद्र बहादुर खत्री बताउँछन् ।
केसीले पढाउने पेल्मा जिल्लाकै बिकट ठाउँमा भिरै भीर भएकाले भिरवाट लडेर वा खोलामा बगेको हुनसक्ने स्थानीयवासीको वलियो तर्क रहेको छ । केसी बेपत्ता भएको एक महिना भन्दा बढी बितिसकेको छ । त्यहाँका जनताहरुको मिलोमतोमा मखनलाई बेपत्ता पारेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । ‘मखन मास्टरसंग गाउँलेको केहि दुश्मनी छैन, साथीभाई जस्तै थियौं, मखनको बेपत्तामा प्रशासनले गाउँलेको मिलोमतो छ भनेर भन्नु सरासर अन्याय हो । दुश्मनी भएको भए १८ बर्ष पेल्मामै बस्नु हुन्थ्यो र ?’ पेल्माका जनप्रतिनिधि मनराज झाँक्रीले सुनाए । ‘गाउँलेको मिलोमतोमा बेपत्ता पारेको आशंक गरिएकाले प्रशासनले घरको एकजनालाई सदरमुकाम बोलाउन सक्ने अनुमान छ । त्यो सरासर जनतालाई दु:ख दिने काम हो । लाटोगाँडोले कानुन बुझ्दैनन् भनेर प्रशासनले मनोमर्जी गर्नु भएन’ मेडिकल संचालक ज्ञान राज पुनले बताए ।
‘शिक्षक मख्खन केसिको बेपत्ता हुनु दु:खद घट्ना हो र कसैको दोष छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ तर दु:खको कुरा यहाँ धान खाने मुसो चोट खाने भ्यागुतो जस्तै भएको छ । जिप्रकाले त्यहाँका लाटोगाँडा जनतालाई दु:ख दिने काम मात्र गरिरहेको छ । के त्यहाँका सरोकारवाला र बुद्दिजिबीहरु र जजसको नाममा कितानी जाहेर गरिएको छ व्यक्तिहरु उपस्थित भएर पुग्दैन ? के त्यहाँका सबै जनता र निजामती कर्मचारीहरु नै उपस्थित हुनु पर्छ ? एउटा शिक्षक बेपता भयो त्यसको छानबिन सम्बन्धित निकायबाट गर्ने हो कि सामुदायिक बिधालय नै बन्द हुने गरि छानबिनको नाममा त्यहाँका शिक्षक शिक्षिका लगाएत सबै जनतालाई तीन चार दिनको बाटो पैडल हिंडाएर जिप्रका पुर्याउने हो ? शिकार आरक्षका कर्मचारी देखि लिएर अरु त कुरै छोडौ मख्खन केसिलाई उपचार गर्ने डाक्टरलाई समेत जिप्रकामा ल्याएर २४ घण्टा थुनेको छ । सोधपुछको नाममा के यो जायज हो ? जनताले केही जान्दैन भन्दैमा मर्जिको मालिक कोहि नबनौं ।’ दुई हप्ता देखि बिद्यालय वन्द भएको र सर्वसाधारण जनतालाई प्रशासनले दु:ख दिएको भनि पुथाउत्तर गंगा २ का रमेश घर्ति मगरले आक्रोस समेत पोखे ।
डोरपाटन शिकार आरक्षका सस बहादुर छन्त्याल, याम बहादुर थापा, लाल चन्द्र थापा, गोबिन्द रेग्मी समेतलाई सदरमुकाम ल्याइएको छ ।आफुहरुको कुनै संलग्नता नभएपनि २४ घण्टा हिरासतमा थुनिएकोमा मेडिकल संचालक ज्ञानराज पुन र वडा सदस्य मनराज झाँक्रीले दुखेसो पोखे ।